DAAWO Abaaraha ku dhuftay dhulka Soomaalida iyo raadadka ay reebeen | Jubbaland Media Online
DAAWO Abaaraha ku dhuftay dhulka Soomaalida iyo raadadka ay reebeen
Posted on April 6, 2016 in Arrimaha Bulshada, Feat, Wararka // 0 Comments
Xoolihii oo ku baaba’ay abaaraha iyo qoysaskii oo lugeenaya
Akhristayaasha sharrafta leh ee ku xiran Jubbaland Media Online, waxaan-u-soo gudbineynaa sawirro muujinaya baaxadda abaaraha ku dhufatay dhulka Soomaalida iyo saameenta ay ku yeesheen dadka iyo duunyadda.
Akhrriste Sawirrada halkan ka muuqda waxaa ku jira hooyooyin oo qaar carruur sita iyo dad da’ ah kuwaasoo ku ceertoobay abaaraha ku dhuftay dhulka Soomaalda, gaar ahaan goballada waqooyi ee la baxay Somaliland sida Awdal oo ah gobalka ugu daran ee abaaruhu ku dhafteen.
Meelaha ugu darran abaaraha waa goballada waqooyi ee Soomaaliya halkaasoo sannadkan uu ku yaraa roobka iyadoo dad badan oo ku tiirsanaa xoolaha ay ka baaba’een.
Si kastaba, Peter de Clercq oo ah isu-duwaha arrimaha gargaarka ee QM ayaa codsaday in loo baahan yahay 105 Milyan oo dollar oo lagu caawiyo ku dhawaad labo milyan oo qof kuwaasoo abaaro baaxad leh ay ku dhufteen kuna nool Soomaaliya.
Haddaba waxaa Alle uga baryeenaa ummadda Soomaaliyeed in uu abaarta ka bixiyo ugu baddala barwaaqo.
Dumar lugeenaya oo biyo ka keenay goobo fogfog
Baaxadda abaarta ay lee dahay
Waa carruur ku dhashay abaaraha
Ilmo yer oo gaajo dartiis u hurday
Hooyo da’ ah oo ku ceertowday abaaraha ku dhuftay goballada waqooyiga Soomaaliya
Ilmo yer oo saliigno lagu quudinaayo
Hooyo xambaarsan ilmo yer oo fadhida goobaha abaaraha aabaaraha ay ku dhufteen
Xuquuqda Sawirradan waxaa leh UNICEF